Akhri: Gaas oo ruqseeyey masuuliyiin badan, kuwa cusubna magacaabay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa soo saaray digreeto uu ku magacaabay qaarka mida Agaasimayaasha wasaaraddaha Puntland.
Wareegtada ayaa xilka looga qaaday dhamaan Agaasimayaashii hore ee ka shaqaynayey Wasaaraddaha maamulka.
Wuxuu sidoo kale Gaas ayaa kala ceyriyey qaar ka mida madaxda Garsoorka Puntland gaar ahaan gobolada Mudug iyo Bari.
C/laahi Axmed Jaamac oo ah Afhayeenka Madaxtooyada Puntland ayaa warbaahinta u guud maray qoraalka uu ku cad yahay isbedelka uu madaxweynaha Puntland ku sameeyey Agaasimayaasha iyo Garsoorka Puntland.
Hadaba kor eeg labada qoraal ee mid lagu magacaabay Afaasimayaasha cusub midna xilka looga qaaday garsoorayaal badan.
Madaxweynaha Kenya oo kasoo hormuuqday maxkamada ICC